International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Joint Statement: Five Years of War: A Call for Peace, Justice, and Accountability in Myanmar
Joint Statement: Five Years of War: A Call for Peace, Justice, and Accountability in Myanmar
Although much of the world has expressed excitement over Myanmar's political transition, communities throughout Kachin and northern Shan states have been living with severe human rights abuses and displacement for the last five years.
Forced into dozens of displacement camps, entire communities have lost their homes, livelihoods, and belongings. Displaced populations continue to face avoidable deprivations in humanitarian aid. The Myanmar government and military have denied humanitarian organizations unfettered access to displaced populations, and funding for Kachin-led aid groups has been insufficient to meet the needs of displaced communities. Unnecessarily delaying travel authorizations to the displacement camps in government controlled areas and entirely restricting access to KIA-controlled areas for humanitarian actors has led to severe consequences for people in need of support.
Today, we express our solidarity with the suffering and struggle of communities and families throughout the war-affected areas and we do so in the spirit of peace, justice, and accountability, which we believe go hand in hand. We call upon the government and military to end the war in Kachin State.
May Sabe Phyu (Kachin Women Peace Network) +95977 88 75 859
Maran Jaw Gun (Kachin Peace Network) +95997 299 8097, 09 731 40 728
Khin Ohmar (Burma Partnership) +66 81884 0772 (Thailand)
5. Brave Heart Social Development Organisation (ရဲရင့်နှလုံးသား"-လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း)
7. Burma Partnership (မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ)
11. Chin Hill Beauty Group – Tedim (ချင်းတောင် အလှအဖွဲ့ - တီးတိန်)
25. Forum for Democracy in Burma (မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု)
27. Green Pyin Oo Lwin (စိမ်းလန်းပြင်ဦးလွင်)
33. Huphokapaw Social Support Group (Kyar In Seik Gyi) [ဟူးဖိုးကပေါ် လူမှုအထောက်အကူ ပြုအဖွဲ့ ( ကြာအင်းဆိပ်ကြီး) ]
34. Independent Asho Chin League (လွတ်လပ်သောအရှိုချင်းများအင်အားစု)
40. Kachin Educators' Synergy Group (KES)
45. Kachin State Democracy Party (KSDP - Kachin)
52. Karuna Funeral Servie – Mindat [ဂရုဏာ နာရေးကူညီမှုအသင်း (မင်းတပ်)]
54. Khumi Youth Group – Paletwa (ခူမီးလူငယ်အဖွဲ့ - ပလက်ဝ)
55. Kung Gyan Gon Network (ကွမ်ခြံကုန်းကွန်ယက်)
58. Mara Thyutlai (MPT) (မာယာလူငယ်အသင်း)
61. Mon- region Social Development Network (မွန်ဒေသလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ရက်)
62. Mon State Community Ceasefire Monitoring Committee (မွန်ပြည်နယ်အရပ်သားအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကော်မတီ)
63. Mon State Community Observers Association လူနေမှုဘ၀လေ့လာဆန်းစစ်သူများအသင်း (မွန်ပြည်နယ်)
64. Mon State CSOs' Network (မွန်ပြည်နယ်အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်၊)
65. Mon State Disaster Prevention and Humanitarian Group [သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့ကူညီပေးရေးအဖွဲ့ (မွန်ပြည်နယ်)]
66. Mon State Environment and Natural Resource Lovers Group [သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သယံဇာတချစ်မြတ်နိုးသူများအသင်း(မွန်ပြည်နယ်)]
68. Mon Women's Organisation (MWO)
71. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability Network (Mon state) [မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဖော်ဆောင်ရေးအရပ်ဘက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (မွန်ပြည်နယ်)]
72. Myanmar Social Development Group (မြန်မာ့လူမှုဘဝ တိုးတက်မြင့်မားရေး အသင်း)
76. National Education & Research Development - NERD
78. Network for Democracy and Development (ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်အားစု)
79. New Steps Women Organisation – Tedim (ခြေလှမ်းသစ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း - တီးတိန်)
80. Olive (သံလွင်ခက်)
82. Our Lovely World (ဒို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ) Shan State
83. Pace on Peaceful Pluralism (သင့်မြတ်သူများ၏ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်)
85. Paungsi Arr Man Social Development Group – Maw Lamyaing (ပေါင်းစည်းအားမာန်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ မော်လမြိုင်)
95. Shan State Students Union (ရှမ်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂ)
99. Shwe Chinthae Social Servicr Group (Shwebo) [ရွှေခြသေ့င်္လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့(ရွှေဘို)]
100. Sittaung Melody Social Network (စစ်တောင်းသံစဉ်လူမှုကွန်ယက်)
101. Southern Shan State Women Network (ရှမ်း / တောင် အမျိုးသမီးကွန်ရက်)
102. Southern Shan State Youth Network (ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလူငယ်ကွန်ယက်)
108. The HELP (မန္တလေး ရပ်ရွာအခြေုပု လိင်တူချစ်သူများ အဖွဲ့စည်း)
110. The PLAN: Public Legal Aid Network (လူထုအခြေပြု ဥပဒေကူညီမှုကွန်ရက်)
116. Women Enpowerment Programme (WEP)
120. Young Kachin Writers' Club
သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် မြန်မာဘာသာကို ဤနေရာတွင်ရယူနိုင်သည်။
ငါးနှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သော ကချင်ဒေသတကျော့ပြန်စစ်ပွဲနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှု တုို့အတွက် တောင်းဆိုချက်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းနေမှုအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက စိတ်လှုပ် ရှားစွာ ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိကြောင်း မည်သုို့ပင်ဖော်ပြခဲ့ကြစေကာမူ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေ ရပ်ရွာ လူထုအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ်ကတည်းကတွေ့ကြုံခံစားနေရသော ပြင်းထန်ဆုိုးဝါးသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု များနှင့် မိမိတုို့ရပ်ရွာကုို စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်း နေထုိုင်နေရမှုများ မှာမူ ပြောင်းလဲတုိုးတက်မှု မရှိခဲ့ပေ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် တစ်ဖန်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သော မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) တုို့အကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများကြောင့် ပြည်သူပေါင်းတစ်သိန်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး စစ်ပွဲကာလအတွင်းတွင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများမှာ ပြင်းထန်သောလူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှုများစွာကို ခံစားခဲ့ရသည်။ဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ အဓမ္မခုိုင်းစေခြင်း၊ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း နှင့် အခြားလိင်ပုိုင်းဆုိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း၊ တစ်ဖက်သတ်စွပ်စွဲ၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စစ်တပ်နှင့် မသက်ဆုိုင်သည့်နေရာများနှင့် အရပ်သားများအပေါ် ပစ်မှတ် ထားတုိုက်ခုိုက်ခြင်း နှင့် ပြည်သူ့အုိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်များကုို ဖျက်ဆီးခြင်းစသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှုများ အပေါ် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူများကုို ဥပဒေနှင့်အညီပြစဒဏ်စီရင်ရခြင်း မရှိသလောက် နည်းပါးနေကြောင်း အပြည်ပြည်ဆုိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများမှမှတ်တမ်း တင်ထားသည်။
ထုိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများစွာထဲမှ အချို.မှာ နိုင်ငံတကာဥပဒေများအရ စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပြီး လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်၍ရသော ပြစ်မှုများဖြစ်သည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများသုို့ မဖြစ်မနေပြောင်းရွှေ.နေထိုင်ရသည့်အခြေအနေကြောင့် လူမှုအသိုင်းအဝုိုင်းတစ်ခုလုံး၏ အိုးအိမ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ရသူများသည် ချို.တဲ့သောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပြတ်လပ်မလောက်ငမှုများနှင့် ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
နေရပ်စွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့ရသော စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ များ လက်လှမ်းမှီရရှိအောင် ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ခွင့်ပြုချက်၊ ခရီးသွားလာခွင့် အကန့်အသတ်များစွာဖြင့် ရင်ဆုိုင်နေရပြီး ကချင်များဦးစီးသည့် ထောက်ပံကူညီရေး အဖွဲ့အစည်းများမှာလည်း စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများ၏များပြားလှသောလုိုအပ်ချက်များကုို ဖြည့်ဆည်း ထောက်ပံ့ပေးနုိုင်လောက်သော ရန်ပုံငွေ မရှိပေ။ အထူးသဖြင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) ထိန်းချုပ်ရာဒေသများရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများသို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ထောက်ပံ့ပေးနုိုင်ရန် အဖွဲ့အစည်း များခရီးသွားလာခွင့်ကုို တာဝန်ရှိသူများမှမလုိုလားအပ်သော နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားရာထောက်ပံ့ရေးအကူအညီများ ပုိုမုိုလုိုအပ်နေသည့်နေရာများသုို့ လက်လှမ်းမှီပေးပုို့နုိုင်မှုအပေါ် ဆုိုးဝါးသည့်အကျိုးဆက်များကုို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နေရပ်စွန့်ခွာပြောင်းရွှေ.ရသောမိသားစုများသည် လုံလောက်သော အစာအာဟာရ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊သောက်သုံးရေနှင့် အိမ်သာ၊ အမုိုးအကာ မရှိနေထုိုင်နေရပြီး ယခုအခါ အချို.မိသားစုများမှာ စားနပ်ရိက္ခာ ပုံမှန်မရရှိတော့သောကြောင့် တစ်နေ့လျှင် ထမင်းတစ်နပ်သာ စားနေကြရပါသည်။ကာကွယ်၍ရနိုင်သော ရောဂါများပင်ဖြစ်သော်လည်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ချို.တဲ့သောကြောင့် မလိုလားအပ်ပဲအသက်ဆုံးမှုများကုို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
စာသင်ကျောင်းများနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများအတွက် ရန်ပုံငွေရှားပါးမှုကြောင့် ကလေးများ၏ ကျောင်းပညာရေး တွင်များစွာနှောင့်နှေး ထိခို်က်စေပြီး မျိုးဆက်တစ်ခုလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ မကြာမီတွင်မိုးရာသီကျရောက် တော့မည်ဖြစ်သော်လည်း နေရပ်စွန့်ခွာပြောင်းရွှေ.ရသော စစ်ဘေး သင့်ပြည်သူများမှာမူ လေဒဏ်၊ မုိုးဒဏ်ကုို ကောင်းစွာ အကာအကွယ်မပေးနုိုင်သော လုံခြုံမှုမရှိသည့် အခြေအနေများတွင် ဆက်လက်ကြိုးစားရုန်းကန်ကာ နေထိုင်အသက် ဆက်နေကြရသည်။ ယနေ့အချိန်အထိနေရပ်စွန့်ခွာပြောင်းရွှေ.နေထိုင်ရသူများအနေနှင့် မိမိတို့ ရပ်ရွာ/နေအိမ်များထံ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာပြန်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဘဝကိုလူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ချက်နှင့် ဖြစ်နုိုင်ခြေမှာ မရှိသလောက်ပင် ဖြစ်နေပါသေးသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း (၁၇) နှစ်ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု အဆုံးသတ်ပြီး လက်နက်ကုိုင်တုိုက်ပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခဲ့ခြင်း (၅) နှစ် နှစ်ပတ်လည် တစ်ဖန်ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင် ညှိနှိုင်းချုပ်ဆုိုခဲ့သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) သည် ထိုစစ်ပွဲများကို ရပ်တန့်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သည် သာမက အားလုံးပါဝင်နုိုင်သော ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှုရရှိ ရန် အလားအလာမရှိသလောက် ဝေးကွာနေပါသည်။
သုို့ပါ၍ ဤသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်၏ အောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်သော ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အောက်ဖော်ပါပြအတုိုင်း တောင်းဆိုသည်။
ပထမဦးစွာ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြာက်ပိုင်းတို့တွင် ထုိုးစစ်ဆင် တုိုက်ခုိုက်နေမှုများကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ပေးရန် မြန်မာတပ်မတော်အား ကျွနု်ပ်တုို့မှ တောင်းဆုိုသည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူ အညီများထောက်ပံပေးနေသောအဖွဲ့အစည်းများအား စစ်ဘေးသင့်ဒေသများအားလုံးသို့ ကန့်သတ်ချက်မဲ့ သွားရောက် ကူညီထောက်ပံ့ခွင့်အပြည့်အဝပေးရန်သမ္မတဦးထင်ကျော်နှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား တိုက်တွန်းသည်။ စစ်တပ်နှင့် အာဏာပုိုင်များအနေဖြင့် စစ်ဘေး သင့်ပြည်သူများ နေထိုင်ရာဒေသများသို့ လုိုအပ်သော အကူအညီအထောက်အပံ့များပေးနုိုင်ရန် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆုိုင်ရာ အကူအညီပေးနေသောအဖွဲ့အစည်းများကုို လုံခြုံ၍ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိစေဘဲရေရှည်သွားလာခွင့်ပေးရန် တုိုက်တွန်းသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူခြင်းမရှိသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကုို ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေစေခြင်းသည် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေမှုများကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာဆုတ်ယုတ်မှုများကုိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အစိုးရနှင့်တပ်မတော်အနေဖြင့် နေရာအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကုို ပြစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားသည့်အစဉ်အလာကုို အပြီးတုိုင်ချက်ချင်း အဆုံးသတ်သင့်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်သူများကို လွတ်လပ်၍ ဘက်လုိုက်မှုကင်းသော တရားရုံးများတွင် မည်သုို့သောရာထူးအဆင့်အတန်းရှိစေကာမူ ဥပဒေအတုိုင်း စစ်ဆေးအရေးယူပြီး ၄င်းတုို့ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများ အတွက် တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှု ရှိစေသင့်သည်။ ထုို့အတူပင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူများကို ၄င်းတုို့၏ ဆုံးရှုံး နစ်နာခဲ့ရမှုများအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောကုစားမှုနှင့် နစ်နာကြေးများကုို လျင်မြန်စွာ ရစေသင့်သည်။
အနာဂတ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးကုို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မြှင့်တင်နုိုင်မှု သေချာစေရန် အစိုးရအနေဖြင့် "ညှင်းပမ်း နှိပ်စက်ခြင်းနှင့် အခြားလူမဆန်ရက်စက်သည့် လုပ်ရပ်များ၊ ချိုးနှိမ်သိမ်ငယ်စေသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှု (သို့မဟုတ်) အပြစ် ပေးမှုတိုိ့ကို ဆန့်ကျင်သော နုိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်" နှင့် "ရောမသဘောတူညီချက်နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး" အပါအဝင်အဓိကကျသောလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နုိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်များကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိဘဲ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးသင့်သည်။ အစိုးရအနေနှင့် လူတုိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေးသည့်အားလုံးပါဝင်နုိုင်မည့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် သေချာစေရန် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ထို့ပြင်ရေရှည်တည်တံ့သောငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်း သိမ်းနိုင်ရန် ထုိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲတွင် အမျိုးသမီးများကို ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုရန်လည်း အရေးကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်ဘေးသင့်ဒေသများရှိ လူမှုအသိုင်းအဝုိုင်းများနှင့် မိသားစုများ၏ ယနေ့ခံစားနေရသော နာကျင်မှုများနှင့် ခက်ခဲရုန်းကန်နေရမှုများအပေါ် ထပ်တူထပ်မျှခံစားရပါကြောင်းနှင့် ဤသုို့ကျွနု်ပ်တုို့၏ ခံစားချက်ကုို ဖော်ပြရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှုကုို လိုလားသော စိတ်ဓာတ်တို့သည်လည်း အတူယှဉ်တွဲ ပါဝင်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်သည်နှင့်အညီ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အား ကချင်ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများ အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ တောင်းဆိုသည်။
ဒေါ်မေစံပယ်ဖြူ (Kachin Women Peace Network) - ၀၉ ၇၇၈၈ ၇၅ ၈၅ ၉ ( maysabephyu@gmail.com)
ဦးမရန်ဂျော်ဂွန်း (Kachin Peace Network) – ၀၉ ၉၇ ၂၉၉ ၈၀ ၉၇, ၀၉ ၇၃၁ ၄၀ ၇၂၈, Jawgun.shalom@gmail.com
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ (Burma Partnership) - + ၆၆ ၈၁၈၈၄ ၀၇၇၂ (khinohmar@burmapartnership.org)
11. Chin Hill Beauty Group – Tedim (ချင်းတောင် အလှအဖွဲ့ - တီးတိန)်
27. Green Pyin Oo Lwin (စိမ်းလန်းပြင်ဦးလွင)်
33. Huphokapaw Social Support Group (Kyar In Seik Gyi) [ဟူးဖိုးကပေါ် လူမှုအထောက်အကူ
ပြုအဖွဲ့ ( ကြာအင်းဆိပ်ကြီး) ]
34. Independent Asho Chin League (လွတ်လပ်သောအရှိုချင်းများအင်အားစ)ု
65. Mon State Disaster Prevention and Humanitarian Group [သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့ကူညီပေးရေးအဖွဲ့ (မွန်ပြည်နယ်)]
100.Sittaung Melody Social Network (စစ်တောင်းသံစဉ်လူမှုကွန်ယက်)
101.Southern Shan State Women Network (ရှမ်း / တောင် အမျိုးသမီးကွန်ရက်)
102.Southern Shan State Youth Network (ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလူငယ်ကွန်ယက်)
104.Summer Shelter (Shan State)
107.Thang Tlang Civil Society Network (TCSN)
108.The HELP (မန္တလေး ရပ်ရွာအခြေုပု လိင်တူချစ်သူများ အဖွဲ့စည်း)
109.The Kachin Relief Fund
110.The PLAN: Public Legal Aid Network (လူထုအခြေပြု ဥပဒေကူညီမှုကွန်ရက်)
111.The Seagull: Human Rights, Peace & Development
112.Thuriya Sandra Environmental Watch Group
113.Upper Chindwin Youth Network
114.Wan-Lark Foundation (Arakan)
115.Wimutti Volunteer Group (WVG)
116.Women Enpowerment Programme (WEP)
118.Yangon Kachin Baptist Youth
119.Yone Kyi Yar Knowledge Propagation Society
120.Young Kachin Writers' Club
127. Democracy for Ethnic Minorities organization (Shan State)
128. Khun Tan New Youth Network – (Thathon) ခွန်တန်နွယ်လူငယ်ကွန်ယက် (သထုံ)